Pakistan qoondayn Pataca Macanese
Peso Cuba Peso Mexico
Peso Uruguay Pound Irish
Pound Lubnaan Pound Masaarida
Pound South Sudan Pound Sudan
Pound Suuriya Qoondayn Hindiya
Qoondayn Nepal Quetzal Guatemala
Rand Riel Kamboodiya
Riyaalka Cumaan Riyaalka Iran
Riyaalka Yemen Riyal Qatar
Riyal Saudi Ruble Belarus
Ruble Ruush Rufiyaa Maldivian
Rupiah Indonesian Saint Helena pound
Sao Tome iyo Principe dobra Seychelles qoondayn
Trinidad and Tobago dollar Troy ounce oo dahab ah / dahab electronic)
Troy ounce oo lacag ah Tugrik Mongoliyaan
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2022.
Halkan waxaad ka ogaan kartaa sicirka lacag kasta maalin kasta. Halkan waxaad ka ogaan kartaa sicirka lacag kasta maalin kasta. Taariikhda adduunka Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka ee 2022 maalin kasta.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 2021.
Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Isweydaarsiga qiimaha iyo xigashooyinka 2021 maalin kasta.
Qiimaha sarrifka iyo xigashada lacagaha adduunka ee 2020.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2020. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2020. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2019.
Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2019 maalin kasta.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2018.
Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 2018. Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 2018. Halkan waxaad ka ogaan kartaa sicirka lacag kasta maalin kasta.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2017.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Maalin kasta Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka (xigasho) loogu talagalay 2017.
Taariikhda sicirka sarrifka iyo oraahda 2016.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2016 maalin kasta.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2015.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2015. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2015. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2015 ee bil kasta iyo maalin kasta.
Taariikhda xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka ee 2014.
Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2014.
Qiimaha sarrifka iyo xigashada lacagaha adduunka ee 2013.
Heerka sarrifka ama oraah sheegashada lacagaha adduunka ee 2013 ee bil kasta iyo maalin kasta. Heerka sarrifka ama oraah sheegashada lacagaha adduunka ee 2013 ee bil kasta iyo maalin kasta. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2012.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2012 ee bil kasta iyo maalin kasta.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 2011.
Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2011 maalin kasta. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2011 maalin kasta. Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan.
Taariikhda xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka ee 2010.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sarrifka lacagta adduunka ee 2010 maalin kasta.
Isweydaarsiga qiimaha iyo xigashooyinka 2009 maalin kasta. Isweydaarsiga qiimaha iyo xigashooyinka 2009 maalin kasta. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Qiimaha sarrifka iyo xigashada lacagaha adduunka ee 2008.
Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2008 ee bil kasta iyo maalin kasta. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2008 ee bil kasta iyo maalin kasta. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2008.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2007.
Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2007 maalin kasta. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2007 maalin kasta. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2006.
Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2006. Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2006. Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta.
Sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2005.
Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2005. Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2005. Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 2005.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 2004.
Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Maalin kasta Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka (xigasho) loogu talagalay 2004.
Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Taariikhda sarrifka lacagaha oo dhan. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 2003 maalin kasta.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2002.
Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta. Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta. Maalin kasta Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka (xigasho) loogu talagalay 2002.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 2001.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2001. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 2001. Taariikhda Oo shilin Soomaali xigashooyinka maalin kasta oo ah 2001.
Taariikhda sicirka sarrifka iyo oraahda 2000.
Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2000 ee bil kasta iyo maalin kasta. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 2000 ee bil kasta iyo maalin kasta. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba.
Qiimaha sarrifka lacagaha, xigashada lacagta adduunka ee 1999.
Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda. Heerka sarrifka ama xigashooyinka Oo shilin Soomaali ee loogu talagalay 1999 ee bil kasta iyo maalin kasta.
Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Taariikhda sicirka lacagta adduunka maalin walba. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 1998 maalin kasta.
Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 1997. Qiimaha sarrifka maalinta saxda ah ee 1997. Kaydinta xogta sarrifka taariikhda.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 1996.
Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Taariikh dhameystiran oo ka soo xigashada qiimaha lacagta maalinle ah. Oo shilin Soomaali sicirka sarrifka iyo xigashooyinka 1996 maalin kasta.
Xigashooyinka iyo qiimaha sarrifka lacagaha adduunka ee 1995.
Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 1995. Taariikhda qiimaha xigashooyinka maalin kasta oo ah 1995. Waxaan haynnaa taariikhda dhammaan lacagaha mayl maalin kasta.